Amabala amhlophe kwiinki. Iimbangela zokubonakala kwamathala amhlophe kwiinkipi. Indlela yokulahla amabala amhlophe kwiimbumba zowesifazane ongumongikazi?
Yintoni ukubonakala kwebala elimhlophe esifubeni malunga nomfazi? Ngokuqhelekileyo kumzimba wesetyhini kukho utshintsho oluninzi lwe-hormonal, olubandakanya ubuninzi beengxaki zempilo. Enye yazo yimibala emhlophe kwiimbilini, ezidla ngokubonakalayo ngexesha lokuncelisa. Ukukhulelwa, ukubeletha, ukungaphumeleli kwe-hormonal okanye ukuyeka umva kunokubangela ukuba bavele. Ngaba sisifo okanye isifo? Indlela yokukrazula le ngxaki ekhaya ngaphandle kokusetyenziswa kwamachiza? Konke oku siza kuthetha ngako kwinqaku lethu.
Izizathu eziqhelekileyo zokubonakala kwamatye kwiintlobo kubasetyhini?
Ukuba sithetha ngomfazi osemncinci, ukubonakala kwazo naziphi na iindawo kwiingxobo kufuneka ziqaphele kwaye zenze ukuba babone ugqirha. Iimbumba zesifuba sesifuba sempilweni sinomfaniswano (ukusuka kwipinki ephothiweyo ukuya kumbala omnyama). Ngamanye amaxesha banokuba neempumlo - oku kuqhelekileyo. Ngokuphambene noko, ukubonakala kwamachaphazi amnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka, e-burgundy okanye amhlophe ngumqondiso we-alamu. Ngokuqhelekileyo oku kubonisa iinkqubo zokuvuvukala, ukuxhatshazwa okanye ubukho beengcingo zesisu (ezininzi zihlala ziphazamiseka).
Ukuba ibhinqa lingazalanga okanye alizange lancelise, uphononongo oluphuthumayo lwe-mammologist kunye ne-mammogram kuyadingeka ukuseka ukuxilongwa kunye nokunyanga okulandelayo.
Amabala amhlophe kwi-ingono isoloko ibonakala ngexesha lokuphuka komzimba okanye ukuhluleka kwe-hormonal. Kule meko, kuya kufuneka ukuba kuhlolwe uvavanyo olunzulu, njengoko ukuveliswa kwee-hormone ngokugqithiseleyo kuncedisa ekubunjweni kwamathambo kunye nezinye iinkqubo ezingafunekiyo kwiintlanzi zamathambo.
Ngokuqhelekileyo amachaphaza amhlophe amaninzi kwiimbumba zivela kubasetyhini ngexesha lokugqibela lokukhulelwa okanye ngexesha lokuncelisa. Oku kubangelwa ukuba i-colostrum, ubisi okanye i-curly curde ivale i-main tract of the breast, ungavumeli ukuba uphume kulo lonke ubunzima. Esifubeni sibonakala intlungu yokudubula, ithulula kwaye, ngokuqhelekileyo, iqondo lokushisa liphakama. Ukungayithobeli le mpawu kunokukhokelela kwi-lactostasis (ukunyuka kwesantya kunye nokuvunywa kobisi).
Indlela yokulahla iindawo ezimhlophe kwiimbopi?
Ukuba le ntokazi ayifuni, ayizange isondle, inokusilela kwe-hormonal okanye ikhefu lokuyeka, kulungele ukuqala ngoviwo kunye nogqirha ofanelekileyo (ugqirha wezilwanyana, okanye umlenze wezilwanyana olungcono). Emva kokuba wenze ukuxilongwa, unokumiselwa nayiphi na unyango. Khumbula ukuba ukuzinyonga kunokukhokelela kwiingxaki ezingathandekiyo.
Ukuba iindawo ezimhlophe zibangelwa ubisi oluvaliwe ngexesha lokuncelisa, kulula ukuwuqeda le ngxaki ngaphandle kokuncediswa ngamayeza. Ukwenza oku, phatha ingono nge-styl cotton swab engaphambili exutywe ngotywala. Lubricate nge bhotela esitsha kwaye ulinde imizuzu emibini. Ekupheleni kweli xesha, bamba ngobumnene isifuba uze ucinezele. Kwiimeko ezininzi, iplagi yobisi iphuma emva kokupasa kokuqala.
Ungesabi, ukuba ukuhamba okukhulu kobisi kuhamba emva kokuba iplagi iphume, kuyinto evamile. Ngentsasa elandelayo akukho mhlophe amhlophe kwi-ingono.
Siyathemba ukuba siye sacacisa, kwaye ingxaki yamacwecwe amhlophe kwiimbande ayiyi kuphinda ikusekrele. Jonga impilo yakho, kwaye ayiyi kukuyeka. Into eyona nto kukuzabalalisa ngokuzenzela. Inhlanhla!
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-almandine
Itiyi eluhlaza kunye nobisi ekulahlekeni kwesisindo
Iimpawu zonyango ze-Artemisia kwiyeza lomntu
Amabhasi kunye ne-cranberries kunye nemon
I-Horoscope ngo-Agasti 2017 ukusuka ePavel Globa: Inyanga ekhuni kakhulu yehlobo izayo
Iibhonsi kunye ne-sinamoni kunye nobisi olunomsolo
Yintoni ekufuneka iguqule ekuziphatheni ukutshata
I-Smashbox yokulungiselela ukulungiswa
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo se-arthritis
IHoroscope ye-2015 ye-Aries
Ndiyayithiya indoda ... Ndiyayithanda loo mfana